Cali Khaliif oo Aflagaadeeyey Isimadda Dhulbahante “Kuwa Bahal higlo ku shiray Cabaas baa dhaama qaar waxba ma qoraan.” (Daawo) | Welcome to Lafweyne.com|
Cali Khaliif oo Aflagaadeeyey Isimadda Dhulbahante “Kuwa Bahal higlo ku shiray Cabaas baa dhaama qaar waxba ma qoraan.” (Daawo)
Sep 27, 2016 - 1 Aragtiyood
Cali, Cabaas iyo Meel Cidla ah!
Prof. Cali Khaliif oo maalmahan marba hadal aan hadaf lahayn ujeedinayey koox taabacsan oo uu ku ururiyey magaalada Balicad ayaa maanta maruu ka hadlayey arrimaha uu rabo inuu dadka wixii ogol ka dhaadhiciyo oo ah in Somaliland loo raaco, wuxuu si meel ka dhac ah ugu gafay isimadda Dhulbahante, wuxuuna ku tilmaamay kuwii bahal higlada ku shirayey waxba ma qoraan waxaana dhaama wiilkan yar ee 5jirka ah.
Cali Khaliif wuxuu isimadda ku eedeeyey inay shirar ku qabteen magaalada Higlada oo uu ku tilmamay bahal higlo haddana ay Alamtara soo dhaafeen. Waxaa runtii la yaable Cali Khaliif Isimadda ma wuxuu moodey wiilasha yar yar ee uu maalin mid wasiir ugu yeedho hadhowna ka qaado!
Cali Khaliif wuxuu aad ugu dheeraayday wuxuu rabay inuu dadka u sheego oo ah in Puntland tidhi annagaa idin leh! Wuxuuna ku goodiyey haddii Puntland faragelinta ka dayn weydo inaan Gaalkacyo la deganaanayn taasoo macnaheedu yahay Galmudug baanu soo raacaynaa! Oo tolow ciidanka iyo cududa Cali ugu faanayo cid kale muu ku xoraysto dhulka uu madaxweynaha u sheegto miyuuse ilaaway in 4 magaalo laga baacsaday, ciidankaasi xaggee jirow?
Gefkan iyo haddaladna aan loo meel deyin ayaan Cali ku cusbayn oo markuu afkaa kala qaadaba uu Isim, beel iyo magaalo Dhulbahante ku duraa hadhowna yeedhaahdaa calaacal iyo war keli keli wax uma qabsan karee itaageera. Cali Khaliif wuxuu yidhi “Isimaddu maba dhaadayaan wiilkan yar ee Cabaas ee Jaamacada u baahan,” Waa su’aale ma ku biirida maamulka Siilaanyo baa Jaamacad lagu helayaa? Cali Khaliif wuxuu dadka ku hanuuniniyaa in haddii Hargeysa la tago la nimcaysan doono!
Prof. Cali Khaliif waxaa u wanaagsanaan lahayd inuusan waqti iska lumine Siilaanyo la hadlo eed la’aan muraadka uu ka leeyahayna u sheegto waayo waxaas oo raadgasho ahi waxay u dhacayeen siduu Somaliland ugu biiri lahaa.
Tuesday,September 27, 2016 9:24 pm at 21:24
Subject:Cali ma miyir qabaa?
ruux rajo ka dhex leh dhulbahante, darod ama somali uma hadlo sida
cali khaliif, wax alaale iyo wuxuu arko wuu caayayaa, anigu waxaan is
idhi, odaygu armuusanba miyir qabin, maxa yeelay dee tani siyasad maha
wa nooc waalida kamid ah